Ny fandoavana fitateram-bahoaka any Singapore miaraka amin'ny Apple Pay dia mety ho zava-misy amin'ny taona 2018 | Avy amin'ny mac aho
Javier Porcar | | Apple Pay, About us, maro
Apple Pay dia hifandray amin'ny Singapore Land Transit Authority, hanatanteraka fitsapana mpanamory fiaramanidina amin'ny fandoavana tapakila bus sy fiaran-dalamby any amin'ny firenena Aziatika. Raha ny fahitana azy, ny mpiara-miombon'antoka ara-teknolojia dia MasterCard, izay hanome fitaovana ilaina mba hahafahana mandoa miaraka amin'ny sehatra fandoavam-bolan'ny Apple manomboka amin'ny taona 2018, raha mahafa-po ireo fitsapana natao. Fanatsarana ny tetik'asa notanterahan'ny manampahefana Singapore hatramin'ny volana martsa lasa teo. Fantatra amin'ny fanafohezana ABT, izy ireo dia mikasa ny hanamora ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fitaterana, mampiditra ny mpamaky ho an'ny fitaovana tsy misy fifandraisana, indrindra ny carte de crédit sy ny EMV.
Ny fitsapana dia natao niaraka tamin'ny 100.000 € izay manome manodidina ny 60.000 fifanakalozana isan'andro. Ny orinasa dia manana pejy fisoratana anarana misokatra ho an'ireo izay te hanandrana ny serivisy fividianana tapakila fifandraisana. Ny asa tsirairay dia voarakitra ao amin'ny rafitra, ary koa ny tranga mety hitranga amin'ny mpampiasa. Aorian'ity dingana voalohany ity, lNy mpamorona ny tetikasa dia mikasa ny hanokatra ny rafitry ny fandoavam-bola amin'ny fomba elektronika, toy ny famantaranandro na telefaona.
Ny CEO an'ny LTA, Ngien Hoon Ping, orinasa izay manatanteraka ny rafitra:
LTA dia mandray anjara amin'ny fahafahan'ny mpandeha mankafy ny fanamorana ny fandoavana elektronika amin'ny fitateram-bahoaka. Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia miara-miasa amin'ny fanitarana, fanitarana ary fametrahana maharitra ABT izahay, ho ivon-kevitry ny fiakarana amin'ny fandoavam-bola elektronika afovoan'ny mpandeha.
Saingy tsy irery i Singapore amin'ny fisoratana anarana amin'ny fandoavam-bola ho an'ny fitateram-bahoaka amin'ny fandoavam-bola amin'ny fitaovana elektronika. Tanàna hafa toa an'i New York no manandrana ny serivisy tambajotram-pitaterana MTA. Ny fanombohany dia andrasana amin'ny tapaky ny taona 2018.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny fandoavana fitateram-bahoaka any Singapore miaraka amin'ny Apple Pay dia mety ho zava-misy amin'ny taona 2018